पन्ध्रौं वाइ वाइ नेशनल एजुकेशन अवार्ड वितरण
काठमाडौं । शिक्षालय मासिक पत्रिकाले प्रदान गर्दै आएको नेशनल एजुकेशन अवार्ड विभिन्न संघ÷संस्था एवम् व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको छ । सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार हस्तान्तरण गरे । अध्यक्ष दाहालले वेष्ट टिचर अवार्ड हनुमन्तेश्वर
पारु तिवारी/काठमाडौं । पठनपाठनको परम्परागत शैली । शिक्षक पाठ पढ्ने । विद्यार्थी सुन्ने । अनि विद्यार्थीले भ्याइनभ्याई शिक्षकले भनेका बुँदा टिपोट गर्ने । तर, काठमाडौंस्थित डियरवाक सिफल स्कूलले भने यस्तो परम्परागत सिकाइको विकल्पमा भिडियो लर्निङ विधि अघि सार्दै आएको छ । विद्यालय अन्तर्गतको डियरवाक
पशुपति मित्र माविलाई ‘शैक्षिक हव’ बनाइने
काठमाडौं । पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना भएका नव आगन्तुक विद्यार्थीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम फरक शैलीमा सञ्चालन गरेको छ । बुधबार सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षक,विद्यार्थी,व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि र अभिभावकलाई बोलाइएको थियो । कार्यक्रममा वडा नं ७ का वडाध्यक्ष तथा सोही विद्यालयका
कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित,३ हजार ६७ जनाले प्राप्त गरे उच्च जीपीए
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाखमा सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार साँझ सार्वजनिक नतिजमा ३ हजार ६७ जना विद्यार्थीले उच्च जीपीए प्राप्त गरेका छन् । बोर्डले ३.६१ देखि ४.०० सम्म उच्च जीपीए मानेको छ । परीक्षामा नियमित र आंशिकतर्फ गरेर ४ लाख २८ हजार ६७ परीक्षार्थी सहभागी
इ–लर्निङका लागि म्याक्स कनेक्टको स्मार्टर एप
काठमाडौं । म्याक्स कनेक्टले स्कूल तहका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ‘स्मार्टर’ नामक मोबाइल एप ल्याएका छ । पछिल्लो समय डिजिटल सिकाइतर्फ आकर्षण बढ्दै गएपछि कम्पनीले यस्तो एप बजारमा ल्याएको हो । एप कक्षा ४ देखि ९ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको कम्पनीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी
चितवन । भरतपुरस्थित वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले सहायक क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा आगलागी र तोडफोड गरेका छन् । क्याम्पस प्रमुख गोविन्द सापकोटाका अनुसार आगजनीबाट सहायक क्याम्पस प्रमुखहरु बस्दै आएको कुर्सी, र टेबुल पूर्णरुपमा नष्ट हुनाका साथै कोठामा रहेका दराज, झ्यालका सिसा पनि तोडफोड
जीपीको नि. क्याम्पस प्रमुखमा मोहनराज राई नियुक्त
काठमाडौं । गिरिजाप्रसाद कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको (जीपी) निमित्त क्याम्पस प्रमुखमा मोहनराज राई नियुक्त भएका छन् । कजेल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा.भीमसेनदास प्रधानले सोमबार राइलाई पद वहाली गराए । सो अवसरमा क्याम्पसका उपाध्यक्ष प्रदेश सांसद माननीय न्युक्ष नारायण श्रेष्ठ,संस्थापक
नक्कली गोल्ड मेडलधारीसहित तीन जना विरुद्ध मुद्धा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीको परीक्षाको प्राप्तांक फेरबदल गर्ने तीन जना माथि सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले त्रिविको आंगिक क्याम्पस भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस दुधपाटी भक्तपुरमा शिक्षण सहायक (आंशिक) पदमा कार्यरत
उच्च शिक्षाका लागि विद्यालय छनोटका आधार
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै माध्यामिक शिक्षा परीक्षा ‘एसईई’ कक्षा १० को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । नतिजा प्रकाशनसँगै अहिले ४ लाख २५ हजार विद्यार्थीले उच्च तहमा अध्ययनका सर्टिफिकेट हातमा लिएर विद्यालयको खोजीमा छन् । के शहर–के गाउँ सबैतिर विद्यार्थीलाई कहाँ पढ्ने ? के विषय रोज्ने ? चिन्ताले
उच्च शिक्षा अध्ययनका विषयमा अमरवाणी मिडियाद्वारा अन्तर्कृया कार्यक्रम हुँदै
काठमाडौ । अमरवाणी अनलाइनले कक्षा ११ मा कहाँ भर्ना हुने,के विषय पढ्ने ? विद्यालय कसरी छान्ने भन्ने विषयमा राउन्ड टेबल आयोजना गरेको छ । काठमाडौँको चावहिलमा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँको पूर्वी भेगमा सञ्चालित कलेजका प्राचार्य तथा सञ्चालकहरूको सहभागिता रहेको छ । उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि तयार विद्यार्थीले
परीक्षार्थीको अंक गोप्य शाखाले थप्योःत्रिवि
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले नौ अङ्क प्राप्त गरेका परीक्षार्थीलाई ६९ अङ्क बनाइएको स्वीकार गरेका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति समक्ष त्रिवि पदाधिकारीले अंक थप गरेको स्वीकार गरेका हुन् । मङ्गलबार समितिले त्रिवका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले
एसईईको ग्रेडिङ प्रणाली सन्तोषजनक भएन
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ग्रेडिङ प्रणाली सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी सरोकारवालाले गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका महासचिव तथा जेभियर इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक लोकबहादुर भण्डारीले ग्रेडले नतिजामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले बिहीबार प्रकाशित २०७५ सालका माध्यमिक शिक्षा परिक्षाको नतिजामा सामुदायिक विद्यालय कमजोर देखिएका छन् । परीक्षा सम्पन्न भएको ८४ औं दिनमा प्रकाशित नतिजामा निजी विद्यालयको समग्र स्तरीकृत अंक (जीपीए) राम्रो देखिएको छ । चार लाख ५९
संघीय शिक्षाको जहाज बिस्तारै हाक्नोस्
काठमाडौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले संघीय शिक्षाको जहाज बिस्तारै–बिस्तारै हाक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेका छन् । संघीयता अभ्यास ‘शिशु’ अवस्थामै भएकाले कतै उच्च गतिमा जहाज चलाउँदा दुर्घटना पो हुने हो कि भन्ने खतराप्रति सजग हुन उनले आग्रह गरेका छन्
सिटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्रप्त शिक्षणसस्था निर्वाध चल्न पाउनुपर्छः महासंघ
काठमाडौं । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, नेपालले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन स्विकृति लिई सञ्चालनमा रहेका संस्था निर्वाध रुपमा चल्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ, नेपालले आफूहरुले २०५० सालदेखि नै सिटिईभीईटीबाट
पत्रकारिताका अध्यापक न्यौपानेलाई विद्यावारिधी उपाधि
काठमाडौं । पत्रकार,आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका अध्यापक मधुदूधन न्यौपानेले पत्रकारितामा विद्यावारिधी उपाधि हासिल गरेका छन् । भारतको साई नाथ विश्वविद्यालयबाट ‘इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्रिन्सिपल्स अफ राइट टू इन्फरमेसन इन नेपाल,एक्सपेक्टेसन एन्ड च्यालेन्जेज’ विषयमा उनले विद्यावारिधी हासिल गरेका
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षाको परीक्षाफल असार दोस्रो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । गत वर्ष असार ९ गते नतिजा प्रकाशित भएकामा यस वर्ष भने प्रदेश नं २ मा परीक्षा स्थगित गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको र कर्मचारी समायोजनका कारण कर्मचारीको
हृदयाघातबाट पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलको निधन
चितवन । पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम (डिआर) पौडेलको आज बिहान निधन भएको छ । उहाँको हृदयाघातका कारण माडीमा निधन भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियारका अनुसार बिहान ७ बजे उहाँको निधन भएको हो । माडी नगरपालिका–५ रमाइलोडाँडास्थित आफ्नै निवासमा हृदयाघात भएपछि बिहान ७ बजे
स्थानीय पाठ्यक्रम संघीयताको जगः शिक्षा मन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले स्थानीय पाठ्यक्रम संघीयताको जग भएको र यसले स्थानीय पहिचानलाई जोड्ने बताएका छन् । आइतबार गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आधारभूत तह (कक्षा १– ८) को स्थानीय पाठ्यपुस्तक विमोचन गर्दै मन्त्री पोख्रेलले स्थानीय पहिचानसँग राष्ट्रिय पहिचानलाई
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामुदायिक र निजी शिक्षालय मिलेर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिनु नपर्ने अवस्था आउन नदिन आह्वान गरेका छन् । ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नारासहित कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) ले आयोजना गरेको
त्रिवि सेवा आयोग खारेजीको माग गर्दै रिले अनशन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै अखिल क्रान्तिकारीले रिले अनशन सुरु गरेका छ । आयोगका पदाधिकारीले अनियमिततापूर्वक आफन्तलाई भर्ती गरेको र पहुँच भएका व्यक्तिको भनसुनका आधारमा लिखित परीक्षा पास गराएको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा विद्यार्थीले
यो शैक्षिक शत्रमा वितरित विद्यालय तहको कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक हेर्दा विषयवस्तुमा गम्भीर त्रुटि र एकै किताबको मूल्यमा एकरुपता नभएको पाइएको छ । साथै, शैक्षिक शत्र एक महिना बित्नै लाग्दा पनि राजधानीकै सामुदायिक विद्यालयहरुले पूरा सेटमा पाठ्यपुस्तक पाइरहेका छैनन् । राजधानीकै बौद्ध नारायणटारस्थित
कृषि विश्वविद्यालको मुख्य कार्यालयमा एक महिनादेखि ताला
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरमा एक महिनादेखि पठनपाठन ठप्प भएको छ । गत चैत २१ गते विश्वविद्यालयको कृषि संकायका सहायक डिन विष्णु ओझालाई विद्यार्थीले कालोमोसो दली अभद्र व्यवहार गरेपछि विश्वविद्यालय ठप्प भएको हो । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार मनराज कोलाक्षपतिका अनुसार ओझालाई कालोमोसो
राष्ट्रिय शिक्षा नीति आउँदैःशिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति तत्काल ल्याउन लागिएको बताएका छन् । शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर शिक्षा नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । उनले भने,‘नीतिको
काठमाडौं । नेपाल जेष्ठ प्राध्यापक समाजको छैठौं साधारणसभाले डा. विमलकुमार शर्माको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिवार काठमाडौं सम्पन्न समाजको अधिवेशनले उपाध्यक्ष ललितबहादुर बस्नेत, महासचिव रेवतीप्रसाद दाहाल, सचिव श्रीमती बद्री लक्ष्मी वैद्य, कोषाध्यक्षमा प्रा.डा. सिद्धिप्रसाद कोइरालालाई
कक्षा १२ को परीक्षा भोलिबाट, ४ लाख २८ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
भक्तपुर । कक्षा १२ को परीक्षा भोलि (आइतबार) देखि सञ्चालन हुँदै छ । यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी पूरा गरेको बताएको छ । बोर्डले प्रश्नपत्रको सुरक्षा सीसीटिभीमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ गर्ने छ । परिक्षामा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त ४ हजार १ सय ३७ विद्यालयका ४ लाख २८ हजार ५२ जना
त्रिविको बेरुजु २१ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार थप भई चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रु
काठमाडौं । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल,हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विद्यालय भर्ना अभियान धेरै वर्षदेखि चलिरहेकोले यसलाई मौसमी अभियान बनाउन नहुने स्पष्ट
बालबालिका विद्यालय भर्नाका लागि अभिभावक सचेतना अभियान जरुरीःप्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिका विद्यालय भर्नाका लागि अभिभावक सचेतना अभियान सञ्चालन जरुरी भएको बताएका छन् । अभिभावक सचेत भएमा सबैले अ–आफ्ना बालबालिका विद्यालय पठाउने भएकाले पहिला अभिभावकलाई सचेत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । बुधबार बालबालिका विद्यालय भर्ना अभियानको
‘शिक्षक लाइसेन्स परीक्षाको विज्ञापन एक साताभित्रै’
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले आउँदो साताभित्र शिक्षण अनुमति पत्र -लाइसेन्स_को परीक्षाका लागि विज्ञापन खुल्ने जनाएको छ । आयोगले विद्यालय शिक्षाका माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तीनै तहका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन लागेको हो । २०७५ चैतभित्रै लाइसेन्सको विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेपनि अनलाइनबाटै